lolo Staxx | Top Slot Site | Mobile & Online £5 FREE | £€$800 Bonus :)
lolo Staxx dia slots ambony lalao mifototra amin'ny foto-kevitry ny Fairytale mahagaga zaridaina, lolo sy ny voninkazo izay azo antoka ny hitondra anao hanakatona ny natiora. Misy efa-polo paylines ao ity lalao ity izay niely manerana reels dimy sy telo andalana. The reels aroso manohitra ny resahana ny renirano tony renirano amin'ny tendrombohitra sy ny zaridaina ny hazo sy ny voninkazo manodidina. Misy mozika mesmerizing nomena izany lalao izany dia mitazona ny saina sy ny vatana nanalefaka teny ampandehanana. Mba wager amin'ity lalao, Misy fetrany napetraka eo £ 0,20 sy ny £ 400 isan-kofehy ireny. Ny lalao dia playable amin'ny finday, Takelaka sy ny biraonao ordinatera.
Ity-pahagagana nanana lohahevitra slots ambony lalao dia novokarin'ny NetEnt. Izy ireo mpisava lalana ao anaty aterineto Casino slots amin'ny mahery roapolo taona ny traikefa. Efa namorona maherin'ny zato lalao in samihafa variants, tsy manam-paharoa ny tsirairay amin'ny traikefa sy ny endri-javatra mba hanampiana ny mpilalao mahavariana ny sasany hahazo valisoa.
ao amin'io slots ambony lalao, dia afaka milalao mareva-doko isan-karazany marika ny voninkazo sy ny lolo. Ny lolo mamirapiratra dia ny karama ambony mariky amin'ny 60 fotoana ny Bet. ny mena, mavokely sy Violet fiaviana roa miloko voninkazo 40x vola ianao rehefa dimy ny tsara fanahy tany amin'ny payline. J, A, K sy nitsinjaka Q ny karatra mandoa ambany kely tsatòkan'i 20x tsirairay. Ny Fandresena rehetra dia raisina rehefa miseho marika avy any ankavia ho amin'ny ankavanana, ny reels amin'ny toerana manaraka. Misy tombony roa fanehoana an'ohatra mba hanampy anao handresy amin'ny endri-javatra kokoa. Izy ireo no fanehoana an'ohatra ny voninkazo samy hafa loko amin'ny felany sy ny voninkazo miloko lavender.
Bonus Wild: Ny voninkazo samy hafa loko isan-karazany ny felany no mariky ny bibidia. Izany manolo hafa rehetra ny sary famantarana ny lalao afa-tsy ny iray izay mahatonga ny aelezo.
ampielezo Bonus: Ny famantarana ny lavender miloko voninkazo dia ny aelezo ity slots ambony lalao. Ny mari-pankasitrahana anao 5, 6 na 7 maimaim-poana ny lalao amin'ny 3, 4 na 5 mariky landings. Nandritra maimaim-poana spins, ianao ihany no mahazo ny miloko maitso cocoon fanehoana an'ohatra eo amin'ny reels. Mamirapiratra rehetra ireo tondra hanova ho lolo izy ireo ary avy eo nifindra tany amin'ny tafahoatra sisa ny reels. Ny rehetra voangony fandresena lolo isan-karazany manolotra ny tsikombakomba sy valisoa lehibe kokoa any amin'ny faran'ny spins rehetra.
Miaraka amin'ny maro loko sary manaitra sy ny saina nitsoka endri-javatra, izany slots ambony lalao tsotra izao ny Fifaliana ny masonao. Izany no tsara indrindra nanana lohahevitra natured slot miaraka amin'ny RTP ny 96.80%.
Jungle Fanahy: Antsoy ny Wild